Pyonepan Way: July 2014
သူက. . .
မျှော်စောင့်နေရစဉ်မှာ. . .
ကိုယ်က. . .
. . .နောက်,
သူ့ကို. . .ပြုံးပြပြီးတော့
Posted by Toe Yee Yee at 6:11 PM No comments:
ပလေတို နဲ့ ဆိုကရေးတီးပြောတဲ့ (အချစ် + လက်ထပ်ခြင်း + တိတ်တိတ်ပုန်း + ဘ၀)
တစ်နေ့မှာ "ပလေတို" က ဆရာဖြစ်သူ "ဆိုကရေတီး" ကို "အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲ"လို့ မေးသတဲ့။
ဆိုကရေတီးက ပလေတိုကို ဂျုံခင်းထဲ နောက်ပြန်မလှည့်တမ်း တစ်ခေါက်သွားစေပြီး
သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာ "အကောင်းဆုံး၊ အကြီးဆုံး ဂျုံနှံတစ်ခု"ကို ခူးစေခဲ့တယ်။
ဆရာခိုင်းတာ အရမ်းလွယ်တယ်ထင်တဲ့ ပလေတိုက ကိုယ့်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့
နေ့တစ်ဝက်ကုန်တဲ့အထိ သူဟာ ဂျုံခင်းထဲမှာပဲ ရှိနေခဲ့ပြီး
နောက်ဆုံးမှာ လက်ဗလာနဲ့ ခေါင်းငိုက်စိုက် ပြန်လာခဲ့ရတယ်။
ဆိုကရေတီးရှေ့ရောက်တော့ "အကောင်းဆုံးလို့ ထင်တဲ့ ဂျုံနှံကို ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်နှံပဲခူးရမယ်ဆိုတော့ အကောင်းဆုံးမှ ဟုတ်ပါ့မလားလို့ ထင်ပြီး မခူးခဲ့ဘဲ
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ အနှံရှိဦးမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ယာခင်းအဆုံးထိ
လက်ထဲမှာ ဘာမှမပါခဲ့မှန်း သတိထားမိတော့တယ်" လို့ ပြောတော့
ဆိုကရေတီးက "အဲဒါ..အချစ်" လို့ ပြောပြခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာ ပလေတိုက ဆရာဆိုကရေတီးကို "လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ"လို့ မေးပြန်သတဲ့။
ဆိုကရေတီးက ပလေတိုကို ထင်းရူးတောထဲ နောက်ပြန်မလှည့်တမ်း တစ်ခေါက်သွားစေပြီး
သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ခရစ်စမတ်အတွက် အသုံးပြုဖို့
"အကောင်းဆုံး ထင်းရူးပင် တစ်ပင်"ကို ယူစေခဲ့တယ်။
သင်္ခန်းစာ တစ်ခါရခဲ့ဖူးတဲ့ ပလေတိုက ဒီတစ်ကြိမ်မှာ အမှားအယွင်းမရှိအောင်
ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ထင်းရူးတောထဲ ၀င်ခဲ့တယ်။
နေ့တစ်ဝက်ရောက်တော့ အရွက်ကျိုးတိုကျဲတဲ့၊ ပင်စည်ဖြောင့်တယ်လို့ ပြောနိုင်တဲ့
ထင်းရူးပင်တစ်ပင်ကို နွမ်းနယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ သူထမ်းပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။
"ဒါက အကောင်းဆုံး ထင်းရူးပင်လား" လို့ ဆိုကရေတီးက မေးတော့
"တစ်ပင်ပဲ ယူရမယ်ဆိုလို့ အကောင်းဆုံးကို တွေ့လိုတွေ့ငြား လိုက်ရှာရင်း
မဆိုးဘူးလို့ထင်တဲ့ အပင်ကိုတွေ့တော့ ကျွန်တော့်မှာ အချိန်ရော၊ အင်အားပါ
ဒါကြောင့် အကောင်းဆုံးလား ဘာလားဆိုတာ ဂရုမစိုက်တော့ဘဲ ယူပြန်လာခဲ့တာပါ"
ဆိုကရေတီးက "အဲဒါ လက်ထပ်ခြင်း" လို့ ပြောပြခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာ ပလေတိုက ဆရာဆိုကရေတီးကို "တိတ်တိတ်ပုန်း''ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးပြန်သတဲ့။
ဒီတစ်ခါ ဆိုကရေတီးက ပလေတိုကို တောထဲတစ်ခေါက် လမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။
သွားရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာ "အလှဆုံး ပန်းတစ်ပွင့် "ကို ယူခိုင်းစေခဲ့တယ်။
ဒီတစ်ခါလည်း ပလေတိုက ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ထွက်ခဲ့ပြန်တယ်။
(၂)နာရီ နီးပါးကြာတော့ စိတ်မသက်မသာနဲ့
အရောင်စုံပြီး အနည်းငယ် ညှိုးနွမ်းနေတဲ့ပန်းတစ်ပွင့်ကို ယူဆောင်ခဲ့တယ်။
"ဒါက အလှဆုံး ပန်းလား" လို့ ဆိုကရေတီးက မေးတော့
"၂နာရီနီးပါး ကျွန်တော်လိုက်ရှာတော့ အလှဆုံးလို့ ထင်ရတဲ့ ဒီပန်းကို
အပြန်လမ်းမှာ ပန်းက တဖြေးဖြေး ညှိုးနွမ်းသွားခဲ့တယ်" လို့
ပြောတော့ ဆိုကရေတီးက "အဲတာ
တိတ်တိတ်ပုန်း" လို့ ဆိုတယ်။
တစ်နေ့မှာ ပလေတိုက ဆိုကရေတီးကို ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲလို့
ဆိုကရေတီးက အထက်ကအတိုင်း ပလေတိုကို တောထဲတစ်ခေါက် လမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာ ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် လျှောက်လို့ရပြီး
သင်္ခန်းစာရထားဖူးတော့ ပလေတိုက သတိရှိရှိနဲ့ ထွက်ခဲ့ပြန်တယ်။
သုံးရက် သုံးညလွန်မြောက်တဲ့အထိ ပလေတို ပြန်မလာလို့ ဆိုကရေတီးက လိုက်ရှာတော့
တောအုပ်တစ်နေရာမှာ ပလေတို တဲထိုးပြီး နေနေတာကို တွေ့လိုက်တယ်။
"အလှဆုံးပန်းကို ရှာတွေ့ပြီလား" လို့ မေးတော့
ပလေတိုက ပန်းတစ်ပွင့်ကို ထိုးပြပြီး
"ဒီတစ်ပွင့်ကို အလှဆုံးလို့ ဆိုနိုင်မလား" လို့ မေးတယ်။
"ဒါဆို ဘာလို့ ခူးမပြန်လာတာလဲ"
"ကျွန်တော် ခူးလိုက်ရင် ပန်းက နွမ်းသွားတော့မယ်။
ကျွန်တော်မခူးရင်လဲ သူနွမ်းသွားမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။
ဒါကြောင့် လှလှပပ ဖူးပွင့်နေတာကို ကြည့်ပြီး
သူညှိုးနွမ်းသွားမှ နောက်တစ်ပွင့်ကို ကျွန်တော်ထပ်ရှာတော့မယ်။
ဒါ ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ ပန်းထဲက အလှဆုံး ဒုတိယပန်းတစ်ပွင့်ပါပဲ"
"အင်း.. ဘ၀ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို မင်းနားလည်ခဲ့ပြီပဲ" လို့ ဆိုကရေတီးက
Posted by Toe Yee Yee at 10:28 PM No comments:
ပြုံးလိုက်ပါ ။မပြုံးချင်ဘဲ ပြုံးနိုင်ခဲ့သူကပိုမိုလှပလာမှာပါ ။
မမုန်းပါနဲ့ ။ကျေးဇူးပြု၍တစုံတရာအပေါ်မုန်းတီးခြင်းအတွေးတွေနဲ့သင့်ရှုံးနိမ့်မယ့် လမ်းစကိုမရွေးပါနဲ့ ။
အမုန်းတရားကို အခြေပြုတဲ့အောင်မြင်ခြင်းထက် ဆန်းစစ် ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ခြင်းမှရသော
အောင်မြင်မှုကသာ ပိုမို ခိုင်မာတည်မြဲပါလိမ့်မယ် ။
အဲဒီလို မလုပ်လို့ ဆုတ်ပြီးယုတ်လာသူတွေထဲမှာသင်မပါဝင်ပါစေနဲ့ ။
Posted by Toe Yee Yee at 7:54 AM No comments:
အဲ့ဒီ မျက်ရည်တွေကို အပြုံးတစ်ခုနဲ့ ဖုံးကွယ်လိုက်နိုင်တဲ့အချိန်ကမှ သင်တကယ်ရင့်ကျက်တာ…။
လောကဓံကို ခံနိုင်ရည်မရှိတာ မဟုတ်ဘူး…။
Posted by Toe Yee Yee at 2:49 AM No comments:
သင့်ဘ၀မှာ အခက်အခဲတွေကို အောင်မြင်ချင်ရင်
သင့်ဘ၀မှာ အခက်အခဲတွေကို အောင်မြင်ချင်ရင်.....
တစ်ခါတလေ သင်ဟာ တစ်ပါးသူရဲ့ အထင်လွဲမှုကို ခံရတယ်။ ဒါကို မဖြေရှင်းချင်တဲ့အခါ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို သင်ရွေးလိမ့်မယ်။ အစကတည်းက လူတိုင်းဟာ သင့်ကိုနားလည်သူတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လောကကြီးကို ကိုယ့်ဒုက္ခတွေ ကြော်ငြာစရာ မလိုဘူးလို့ သင်ထင်တယ်။တစ်ခါတလေမှာ သင့်အချစ်ဆုံးသူတွေက သင့်အပေါ် သဘောထားလွဲမယ်။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ သင်နာကျင်ခံစားရပြီးမဖြေရှင်းချင်တဲ့အခါ တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို သင်ရွေးပါ။ လောကတစ်ခုလုံး သင့်ကို နားမလည်ချင်နေပါစေ။ သင့်အချစ်ဆုံး သူက သင့်ကို နားလည်သင့်တယ်။ တကယ်လို့ သူပါ သင့်ကို နားမလည်ခဲ့ရင် ဘာများပြောစရာ ရှိတော့မလဲ?ဒါကြောင့် တစ်ခါတလေ စကားမပြောချင်တော့တဲ့အခါ မပြောပါနဲ့။ ပြောဖန်များလည်း အရာမထင်တော့တဲ့အခါဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းက အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
လူ့ဘဝရဲ့ ချောက်ကမ်းပါးထဲ သင်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန် သင့်ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေက သင့်ကို စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့၊ပျော်ရွှင်ဖို့ အားပေးလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ဆိုတာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပေမယ့် ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲလိမ့်မယ်။ ဆုံးရှုံးခြင်းတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရချိန် ဘယ်သူကမှ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ တည်ငြိမ်ရမယ်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ပြဿနာရဲ့ အတိမ်အနက်ကို ကြည့်ရမယ်။ ဖြေရှင်းရမယ်။ တည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာ ပျော်ရွှင်ခြင်းလဲ မဟုတ်သလို မပျော်ရွှင်ခြင်းလဲ မဟုတ်ဘူး။
လူ့ဘဝဆိုတာ လမ်းခွဲတွေများတဲ့ အဆုံးမရှိလမ်းမကြီးဖြစ်တယ်။ မပြတ်တဲ့ ရွေးချယ်ခြင်းတွေနဲ့ ခရီးဆက်နေရတယ်။နေ့တိုင်းစားတဲ့ အစားအစာကို ရွေးချယ်တာက သက်ရောက်မှု သိပ်မရှိပေမယ့် အလုပ်အကိုင်၊ အိမ်ထောင်ဖက်၊အိမ်ထောင်ပြု မပြု၊ ကလေးယူ မယူ စတဲ့ ရွေးချယ်မှုတိုင်းက ဘဝတစ်ခုလုံးကို သက်ရောက်စေတယ်။ မတူတဲ့ရွေးချယ်မှုက မတူတဲ့ဘဝကို တည်ဆောက်ပေးတယ်။
ဘဝမှာ သည်းမခံနိုင်အရာက လူ့ဘဝကို အသစ်ပြန်စစေတဲ့ အခွင့်အရေး မရှိတာပဲ။“တကယ်လို့ အစတည်းက ဒီလိုရွေးခဲ့ရင် အခုချိန်မှာ ဒီလိုဖြစ်နေမှာ မဟုတ်ဘူး”လို့ ညည်းတွားမနေနဲ့။ သင်ရွေးချယ်တဲ့ ဘဝလမ်းခွဲတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတာ မရှိသလို အဆိုးဆုံးဆိုတာလည်း မရှိဘူး။ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် သင်လျှောက်လှမ်းဖို့ပဲ လိုတယ်။ ဖြောင့်ဖြူးအောင် ဖန်တီးဖို့ပဲလိုတယ်။ ဒါမှ ရွေးခဲ့တဲ့လမ်းမှားတယ်လို့ အတိတ်ထဲ သင်တဝဲလည်နေတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
စိတ်ရှုပ်စရာ တွေးတောမှုတွေက သင့်ဘဝကို ရှုပ်ထွေးစေသလို လက်ရှိပစ္စုပန်မှာ သင် အသက်ရှင်နေထိုင်နေပေမယ့်အတိတ်ကို သင် တမ်းတနေတတ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် အနာဂတ်အတွက် တွေးပြီး စိုးရိမ်ပူပန်နေတတ်တယ်။ အတိတ်ကိုပစ္စုပန် နဲ့ အနာဂတ်ထိ သယ်ဆောင်လာတာဟာ သင့်ဘဝကို မသပ်ရပ်စေဘူး။ ရှုပ်ထွေးပွေလီစေတယ်။ရိုးရှင်းခြင်းဆိုတာ တင့်တယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဥပမာ – ရာသီဥတုအပြောင်းအလွဲကို အရေပြား နဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ခံယူမယ်။မိုးရွာပြီးစ မြက်ရနံ့တွေကို နှာခေါင်းနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ရှုရှိုက်မယ်။ အဝေးက လှပတဲ့ရှုခင်းကို ပန်းချီကားတစ်ချပ်လို မျက်လုံးနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အရသာခံမယ်။ ရိုးရှင်းခြင်းက ဒီလောက် လွယ်ကူပါတယ်။ပစ္စုပန်မှာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်မယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်ရင် စိတ်ရှုပ်စရာတွေ တွေးတောဖို့မလိုဘူး။ အတိတ်ကိုလည်း တမ်းတဖို့မလိုဘူး။ အနာဂတ်အတွက်လည်း စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုဘူး။ ရိုးရှင်းတာကို လက်ကိုင်ထားပြီး ဘဝကို သက်တောင့်သက်သာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။
သင့်အကြောင်း လူတွေမဟုတ်မမှန်ပြောလို့ ဒီနေ့ သင်မပျော်ဘူး။ လူတွေနဲ့လည်း သင် ရန်မဖြစ်ချင်လို့ လူတွေနားက သင်ခွာခဲ့တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်သာ လူတွေဆီက သင် ခွာခဲ့ပေမယ့် သင့်စိတ်က နာကျင်ခြင်းထဲကနေ မခွာနိုင်ခဲ့လို့ တွေးလေ သင် ဒေါသထွက်လေဖြစ်မယ်။ ဒေါသဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ တခြားအလုပ်ပေါ်မှာ သင် အာရုံမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။စိတ်ပါလက်ပါ သင် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီး အရေးပါတဲ့အရာတွေကို သင်လျစ်လျူရှုမိတတ်တယ်။
သင့်စိတ်ကို သူတစ်ပါးရဲ့အမှားတွေနဲ့ လွှမ်းမိုးထားလို့ ဖြစ်တယ်။ခံစားချက်ကို အကျယ်ချဲ့တာဟာ သင်ရဲ့ဖြုန်းတီးမှုဖြစ်တယ်။ အဆိုးဝါးဆုံး ဖြုန်းတီးမှု ဖြစ်တယ်။ ဒေါသထွက်ဖို့ အားစိုက်ရတယ်။ ဒေါသထွက်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိတယ်၊ ခွန်အားဗလကို ထိတယ်။ ဒါကြောင့် ထက်မြက်တဲ့သင်ဟာ ခံစားချက်ရဲ့ အထိန်းအချုပ်ကို မခံရပါစေနဲ့။ ဒေါသမထွက်ခင် သင့်ကိုယ်သင် “ခံစားချက်ကို အလဟသမဖြုန်းနဲ့” လို့ ညင်ညင်သာသာ သတိပေးပါ။
သင်ကြိုက်တဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ဝယ်ခဲ့ပြီး မဝတ်ရက်ဘဲ ဗီရိုထဲ ဒီအတိုင်း သင်သိမ်းထားတယ် ဆိုပါစို့။ ကာလကြာမှအဲဒီအင်္ကျီကို ဝတ်ဖို့ သင်သတိရချိန် အင်္ကျီဟာခေတ်ကုန်နေပြီဆိုတာကိုသင်သတိထားမိလိမ့်မယ်။
အရသာရှိပြီး လှပတဲ့ ကိတ်မုန့်တစ်တုံးကို ဝယ်ခဲ့ပြီး မစားရက်ဘဲ ရေခဲသေတ္တာထဲ သင် ထည့်ထားမိတယ် ဆိုပါစို့။ကာလကြာမှ ကိတ်မုန့်စားဖို့ သင် သတိရချိန် ကိတ်မုန့်ဟာ ဒိတ်လွန်နေပြီဆိုတာကို သင်သတိထားမိလိမ့်မယ်။
နှစ်သက်ချိန်မှာ မဝတ်လိုက်ရတဲ့ အင်္ကျီ၊ စားချင်တဲ့အချိန်မှာ မစားလိုက်ရတဲ့ ကိတ်မုန့်၊ ဆန္ဒရှိတဲ့အချိန်မှာမလုပ်လိုက်ရတဲ့ အလုပ် … ဒါတွေဟာ ဝမ်းနည်းခြင်းတွေဖြစ်တယ်။ဘဝမှာလည်း ဒိတ်လွန်နေ့စွဲတွေရှိတယ်။ လုပ်ချင်တာကို အချိန်မနှောင်းခင် အရွယ်ကောင်းခင် လုပ်သင့်တယ်။တကယ်လို့ လုပ်ချင်တာကို စိတ်ထဲမှာပဲထားပြီး အကောင်အထည် မဖော်ခဲ့ရင် နောက်ဆုံးရလဒ်က မဝတ်လိုက်ရတဲ့အင်္ကျီလို၊ မစားလိုက်ရတဲ့ ကိတ်မုန့်လို နောင်တနဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်းတွေပဲ ကျန်ခဲ့လ်ိမ့်မယ်။သင့်ကိုယ်သင် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။
ဘာပူဆွေး ဝမ်းနည်းစရာမှ ချန်မထားခဲ့ပါနဲ့။
Credit: Sai Sai (forward mail) Top1
သတင်း၊စာကောင်းပေမွန်များကို ကြိုက်နှစ်သက်သူများ SearchMyanmar Page လေးကို Like & Follow လုပ်ထားပေးပါနော်
Posted by Toe Yee Yee at 4:14 PM No comments:
သင့်မှာ မျက်လုံးနှစ်လုံးနဲ့  လျှာတစ်ချောင်းရှိတယ် ။ ဒါတွေကသင်အနေနဲ့ နှစ်ကြိမ်လောက်ကြည့်ပြီးမှ တစ်ကြိမ်လောက်ပြောသင့်တာကို ရည်ညွှန်းတယ် ။
ထို့ အတူသင့်မှာ နားနှစ်ဖက်နဲ့ ပါးစပ်တစ်ခုရှိပါတယ် ။ ဒါက ပြောဆိုဖို့ ထက်နားထောင်တတ်ရန် ပို၍ လိုအပ်တာကို ဖော်ပြပါတယ် ။
သင့်မှာ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ အစာအိမ်တစ်ခုရှိရဲ့ ။ ဒီအတွက် စားတဲ့ပမာဏထက် အလုပ် နှစ်ဆ လုပ်ဖို့ 
မဖြစ်မနေ လိုအပ်တယ် ။
အလားတူ သင့်မှာ ပင်မဦးနှောက်ဘယ်ညာနှစ်ခြမ်းနဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုရှိတယ် ။ဒီလိုဆိုရင် သေချာစွာ
စဉ်းစားပြီးမှ သင် ချစ်တတ်ဖို့ ရာ အရေးကြီးတာကို ရည်ညွှန်းတာပေါ့ကွယ် ။
ယင်းသို့အံ့ဖွယ်ကိုယ်ခန္ဓာအင်္ဂါများက လူသားတွေ မည်သို့ရှင်သန်နေထိုင်သင့်သလဲဆိုတာ အချက်ပြနေပါတယ် ။
ဒါကြောင့် တစုံတရာကိုပြုမူမယ်လို့ ကြံစည်မိတိုင်းသင့်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအင်္ဂါ များကိုလေးစားသောအားဖြင့်
အဖြေမှန်တွေကို ရှာဖွေနိုင်ပါစေ ။
Crib from Daily Health Tips
Posted by Toe Yee Yee at 9:13 AM No comments:
“ချစ်တယ်”လို့ ခဏခဏပြောဖို့ မနှမြောစမ်းပါနဲ့။
ဘာအလွမ်းနဲ့မှ အာပတ်ဖြေလို့မရဘူး . . .။
ငါတို့ ဘာဖြစ်လို့ အငြင်းပွားနေကြရတာလဲ၊
(တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်) နားမလည်တာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့။
ငါတို့ ဘာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်
သံသယဖြစ်နေကြတာလဲ . . .၊
ယုံကြည်ထားခဲ့ရဲ့သားနဲ့ . .။
ဒေါသတွေဖြစ်နေကြတာလဲ . . .၊
စောင့်ကြည့်အကဲခပ်နေကြပုံမျိုး . . .။
ဒါ စစ်တုရင်ထိုးနေတာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွယ်။
မင်း ငါ့ကို လွမ်းတဲ့အခါ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါ
“ချစ်တယ်”ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုမကြာခဏပြောဖို့ မနှမြောစမ်းပါနဲ့။
မင်းက ဘာစကားမှ မပြောပဲ ဖုန်းကိုပိတ်ထားရင်
ဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ကိုင်ထားရတာနဲ့
Posted by Toe Yee Yee at 3:37 PM No comments:
( အလွန်ဖတ်သင့်သော စာကောင်းလေးပါ ....မိတ်ဆွေ ဖတ်ပြီးလို့ အကျိုးရှိမယ်ထင်ရင်အများကို မျှဝေ ...
Share လုပ်ပေးသွားဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ... )
၁။ ဝင်ငွေမ ကောင်းတဲ့အခါချွေတာသုံးစွဲတာအကောင်းဆုံးယတြာ။
၂။ လမ်းသွားတဲ့အခါကြီးမားတဲ့ဝီရိယထားခြင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းဖို့ အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ။
၄။ ဒေါသထွက်စရာ ကြုံတဲ့အခါစိတ်ဖြေသာတဲ့နေရာကိုရှောင် ထွက်သွား ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးယတြာ။
၅။ မနာလိုဝန်တိုစိတ်ကိုမမွေးအောင်ကံ ကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံနိူင်အောင်ကြိုးစားတာအ ကောင်းဆုံးယတြာ။
၆။ စိတ်ကောင်းထားခြင်းရိုးသားမှုရှိခြင်းဟာကြီးပွားရာ ကြီးပွားကြောင်း အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ။
၉။ တစ်စုံတစ်ရာ ကျွေးမွေးပေးအပ်သူကို ကျေးဇူးရှင်တစ်ဦးအဖြစ် မမေ့အပ်တာအကောင်းဆုံးယတြာ။
၁၀။ သူ့တာဝန် ကိုယ့်တာဝန်ကိုတိတိကျကျ ခွဲခြားပြီးတာဝန်ကျေပွန်စွာ လုပ်တာအကောင်းဆုံးယတြာ။
၁၁။ ရှေ့နောက်မြော်မြင် တတ်တဲ့ပညာရှိ လူကြီးမိဘရဲ့ဆိုဆုံးမမှုကို လိုက်နာတာအကောင်းဆုံးယတြာ။
၁၂။ မရ သေးတဲ့ဥစ္စာကိုအပူတပြင်းမတောင့်တမလိုချင်တာစိတ်ချမ်းသာစေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ။
၁၃။ တတ်နိူင် သလောက်စုဆောင်းသွားတာဟာအနာဂတ်ခရီးအတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ။
၁၆။ ငယ်စဉ်အခါ ပညာသင်ချိန်မှာပညာတတ်ရေးတစ်ခုတည်းကိုရှေ့ရှု့ပြီးတစိုက်မတ်မတ်
ကြိုးစားခြင်း ဟာ နောင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံး ယတြာ။
၁၇။အခွင့်အလမ်းပေါ်လာတဲ့အခါလုံ့လဝီရီယကို ရှေ့တန်းတင်ပြီးအမိအရဆုပ်ကိုင် လိုက်ခြင်းဟာ
၁၈။ ဘာကိုမှမစဉ်းစားပဲမလုပ်တာမပြောတာ နောင်မှနောင် တ ရ တယ်ဆိုတဲ့
အဖြစ်မျိုးကို မ ရောက်ဖို့ အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ။
၂၀။ ဘေးရှိတဲ့စကားကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုမဆိုခြင်းဟာနောင် အခါပြဿနာအရှုပ်အရှင်းနဲ့
၂၁။ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက်မျှမျှတတကြည့်တာ စဉ်းစားတာလုပ်ကိုင်တာသည်
၂၂။ မနိူင်တဲ့ဝန်ကို မထမ်းတာဟာအသက် ရှည်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ။
၂၃။ မိမိကိုယ်ကို အမှန် ရှု့ထောင့်မှဝေဖန်သုံးသပ်တာဟာရှေ့လျှောက်ရမယ့်ဘဝခရီးမှာ
၂၅။ ကျော်ဖြတ် ရတဲ့ဘဝခရီးမှအမှားများကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးချက်ချင်းပြုပြင် သွားတာ
၂၆။ အတိတ်ကို ပြန်တွေးပြီးလဲမပူဆွေး။ အနာဂတ်အရေးကိုလှမ်းမျှော်ပြီးလည်းမပူပန်။
၂၇။ အ ကောင်းမြင် ဝါဒနဲ့ဘဝခရီးကိုဆက်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးယတြာ။
၂၈။ ကျန်းမာရေးယိုယွင်းစေတဲ့အပျော်အပါး လိုက်စားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့အရက် သေစာကို
ရှောင်ရှားတာဟာအသက်ရှည် ကျန်းမာစေ ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးယတြာပါ။
Posted by Toe Yee Yee at 9:36 PM No comments:
ကွန်ပျုတာ Speed မြန်အောင်လုပ်နည်း (၅) နည်း
ကွန်ပျုတာ Speed မြန်အောင်လုပ်နည်း (၅) နည်း ပထမဆုံးနည်းလမ်းက Start >> Run (or) win + R ကိုကလစ်ပါ.. run box တွင် prefetch ကိုရေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့ ဖိုင်တွေအားလုံးကို delete ပေးလိုက်ပါ။
ဒုတိယနည်းလမ်းက Start >> Run (or) win + R ကိုကလစ်ပါ.. run box တွင် regedit ကိုရေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့ Registry Editor box အောက်က HKEY_CURRENT_USER >> Control Panel >> Desktop ထိအစဉ်လိုက်သွားလိုက်ပါ.. Desktop ရောက်ရင် double click ပေးလိုက်ရင်ဘေးက box က MenuShowDelay ကို right click >> modify>> Value data ကို 400 ကနေ0ထိလျှော့ချပေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ။
တတိယနည်းလမ်းက Start >> Run (or) win + R ကိုကလစ်ပါ.. run box တွင် msconfig ကိုရေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့ box မှာ Startup Tab ကိုသွားပါ.. အဲဒီက မလိုအပ်ဖူးထင်တဲ့ software တွေက အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ. ပြီးရင် Apply ok ပေးလိုက်ပါ restart တောင်းပါလိမ့်မယ် Exit Without Restart ကိုပဲကလစ်လိုက်ပါ. တကယ်ဆိုရင် restart ပေးရမှာပါ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့က နည်းလမ်းငါးမျိုးလုံးလုပ်မှာဖြစ်လို့ မပေးပါနဲ့ အားလုံးပြီးမှ restart ပေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်။
စတုတ္တနည်းလမ်းက Start >> Control Panel >> System ထိရောက်အောင်သွားပြီး double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ပါ. (mycomputer >> right click >> Properties ဆိုရင်လည်း တူတူပါပဲ) System Properties Box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Advanced Tab >> Performance Settings ကိုကလစ်လိုက်ပါ. Adjust for best performance ကိုရွေးပြီး Apply ok ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ.. PC ကတော့ ပုံစံပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ် effect တွေမပါတော့တဲ အတွက် သိသိသာသာ ပေါ့ပါးသွားပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးနည်းလမ်း ကတော့ Start >> Run (or) win + R ကိုကလစ်ပါ.. run box တွင် system.ini ကိုရေးပြီး ok ပေးလိုက်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့ Notepad ထဲမှာ အောက်က code လေးကို copy ကူးပြီး အောက်ဆုံးမှာ ထည့်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ.. page buffer=100000kbps load=100000kbps Download=100000kbps save=100000kbps back=100000kb ပြီးရင် file >> save ပေးပြီး close လိုက်ပါ ..အားလုံးပြီးပြီဆိုရင် ကွန်ပျုတာကို restart ချလိုက်ပါ။
Posted by Toe Yee Yee at 4:26 AM No comments:
ကျန်ခဲ့လေပြီ....။နေရစ်တော့မလား...မထားရက်လို့ နောက်ပြန်လှည့်ကြည့် ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ်..အတူတူလေ...။
မလိုက်ချင်..ငြိုငြင်ရင်းနဲ့ ချန်နေရစ်မလား အတွေးကပွား လက်ကဆွဲပြီးခေါ်ချင်တယ်...။
ဆွဲမယ့်လက်လည်း ရော့တိရော့ရဲ အားကမရှိ..ကိုယ်တိုင်ကလည်း မပြည့်မစုံ။
ဟိုးအဝေးကြီး...သူကျန်ခဲ့မှာ စိုးမိပါလည်း အတင်းလှမ်းဆွဲ ဒီလက်ကိုပယ်..ဖယ်ချင်တဲ့သူ...
ခေါင်းမာမာနဲ့ ခြေအစုံရပ် မာနမျက်လုံး မုန်းမာန်မဆုံးလည်း ရင်ထဲမှာတော့ မေတ္တာမပျယ်...။
ကျန်ခဲ့လေပြီ...။ထားမသွားရက်လည်း မလိုက်ချင်သူမို့ နေပါစေတော့....။
ဒီကမျက်လုံး ရီဝေနှလုံး ခေါင်းကိုငုံ့ရင်း မချိပြုံးနဲ့ ပြုံးမိတယ်...။
ဟိုးအဝေးကြီးမှာ စိတ်လိုလက်ရ နောက်မှာချန်ရစ်...နေနေရစ်တော့.....နေရစ်ကြတော့ကွယ်...။
Posted by Toe Yee Yee at 3:17 AM No comments:
ပလေတို နဲ့ ဆိုကရေးတီးပြောတဲ့ (အချစ် + လက်ထပ်ခြင်း ...
Toe Yee Yee
says something about.......
ဘုစုမွေးနေ့ မောင့်အမှတ်တရ ကဗျာလေး
ဝက်သတ်သမား ဒကာ မောင်စိန်
☺ ထာဝရသစ္စာ ☺
ဘာကြောင့် ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး ခြေထောက်ဆေးသင့်သလဲ
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်း ပြောပြခြင်း
Myanmar News Updates
Window 8 စတိုငျကဲ့သို့သော-Home 8+ like Windows8 Launcher v3.9.0 build 88Apk
Zawlin IT World
Internet Download Manager 6.19 Full Version (Crack + Patch + Serial Key)
Mya Than Lin